Tena mila mitondra tena tsara kokoa ny olombelona amin'ny media sosialy | Martech Zone
Tena mila mitondra tena tsara kokoa ny olombelona amin'ny media sosialy
Alatsinainy, Novambra 13, 2017 Alatsinainy, Novambra 13, 2017 Douglas Karr
Tamin'ny fihaonambe vao tsy ela akory izay dia nifanakalo hevitra tamin'ny mpitarika media sosialy hafa aho momba ny fiakaran'ny toetr'andro tsy salama amin'ny media sosialy. Tsy dia ny resaka fisaratsarahana politika ankapobeny, izay miharihary, fa momba ny fitomboan'ny hatezerana izay miampanga isaky ny misy olana mampiady hevitra.
Nampiasa ilay teny aho fifanosehana satria izay no hitantsika. Tsy miato intsony izahay amin'ny fikarohana ny olana, miandry ny zava-misy, na koa mamakafaka ny toe-javatra misy. Tsy misy fanehoan-kevitra lojika, fa fihetsem-po fotsiny. Tsy azoko atao ny mieritreritra ny sehatra media sosialy maoderina ho toy ny Colosseum miaraka amin'ny kiakiakan'ny vahoaka amin'ny ankihibenkony. Ny tsirairay izay maniry ny tanjon'ny fahatezerany dia hotriatra sy haringana.
Mora ny mitsambikina amin'ny fifanenjanana ara-tsosialy satria tsy fantatsika ara-batana ilay olona, ​​na ireo olona ao ambadiky ny marika, na manaja ireo tompon'andraikitra amin'ny governemanta izay nifidianan'ny mpifanila trano aminay. Amin'izao fotoana izao, tsy misy ny fanarenana ny simba nataon'ny omby… tsy maninona na mendrika ilay olona na tsia.
Nisy olona (iriko mba tadidiko hoe iza) no nanoro hevitra ahy hamaky Ka menatra imasom-bahoaka ianao, nataon'i Jon Ronson. Nividy ilay boky aho tamin'io fotoana io ary niandry ahy tamin'ny fiverenako avy tamin'ny dia. Nandalo am-polony na tantara momba ny olona menatra ampahibemaso, tao anaty sy ivelan'ny media sosialy ary ny valiny maharitra ny mpanoratra. Ny vokatr'ilay henatra dia manjombona tokoa, miaraka amin'ireo olona miafina mandritra ny taona maro ary na dia vitsivitsy aza izay namarana ny fiainany fotsiny.
Tsy tsara kokoa isika
Ahoana raha fantatr'izao tontolo izao ny ratsy indrindra momba anao? Inona no zavatra ratsy indrindra nolazainao tamin'ny zanakao? Inona ny eritreritrao mahatsiravina indrindra momba ny vadinao? Inona no sangisangy tsy tena miloko indrindra izay nihomehy na notantarainao?
Toa ahy, azonao atao ny misaotra fa tsy ho hitan'ny andian'ondry ireo zavatra momba anao ireo. Ny olombelona dia misy lesoka avokoa, ary maro amintsika no miaina amin'ny nenina sy ny fanenenana noho ny zavatra nataontsika tamin'ny hafa. Ny maha samy hafa azy dia tsy isika rehetra no niatrika henatra imasom-bahoaka tamin'ireo zavatra mahatsiravina vitantsika. Misaotra soa.
Raha isika dia Hita fa mangataka famelana izahay ary mampiseho amin'ny olona ny fomba nanitsianay ny fiainantsika. Ny olana dia efa ela ny omby rehefa mitsambikina amin'ny mikrô isika. Tara loatra, nohitsakitsahina ny fiainantsika. Ary nohitsakitsahin'olona tsy misy kilema na mihoatra noho isika.
Esory ny lolompo rehetra, fahavinirana sy fahatezerana, fifandirana sy fanendrikendrehana miaraka amin'ny lolompo rehetra. Mifankatiava sy mifamindra fo amin'izay mifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Efesiana 4: 31-32
Raha hanohy handeha amin'ity lalana ity isika dia tsy maintsy lasa olombelona tsara kokoa. Tsy maintsy mitady hifamela heloka haingana isika rehefa mitady hifamono. Tsy mimari-droa ny olona, ​​ary tsy tokony hotsaraina isika hoe tsara na ratsy. Misy ny olona manao fahadisoana. Misy ny olona ratsy fanahy izay mamadika ny fiainany ka lasa olona mahatalanjona. Mila mianatra manisa ny tsara voajanahary amin'ny olona isika.
Ny safidy hafa dia izao tontolo izao mahatsiravina izay mirongatra ny stampedes ary isika rehetra dia miafina, miafina, na mikapoka. Tontolo iray izay tsy ahasahiantsika miteny ny saintsika, miresaka adihevitra mampiady hevitra, na manambara ny zavatra inoanay. Tsy tiako hiaina anaty tontolo toa izao ny zanako.
Misaotra an'i Jon Ronson nizara ity boky manan-danja ity.
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy afiliana Amazon ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: AffiliatefahatezeranafifandiranafangorahanafanenenanaEfesianinafamelan-kelokajon mononatsara fanahylolompoboky marketingfahatezeranaSameramahamenatrafanendrikendrehanany alahelofifanosehana
Inona avy ireo paikady ara-barotra mahomby indrindra?